Caadooyinka bulshada iyo halista dumarka ee rabshadaha wada noolaashaha ee Nepal - Equal Access International
Fahamka saameynta IPV waa baahi udub dhexaad u ah ka hortagga. Iyada oo loo marayo farsamooyinka isgaarsiinta hal abuurka ah ee toos uga hadlaya caadooyinka bulshada, EAI's Isbedelku wuxuu ku bilaabmayaa guriga mashruucu wuxuu aqoonsaday caadooyinka bulshada ee si nidaamsan u aqbala falalka IPV ee ka dhaca Nepal iyo wixii ka dambeeya.
Rabshadaha lammaanaha (IPV) waa mashaakil caafimaad oo caalami ah, oo qiyaastii 30% dumarka da'doodu tahay 15 ama ka weyn la kulmayaan cimri nololeed iyo / ama galmada IPV. ”
Dalka Nepal, 75% ragga iyo dumarka ama gebi ahaanba ama qayb ahaan waxay ku heshiiyeen in ragga ay dabiici ahaan yihiin kuwo dagaal badan, iyo ku dhawaad ​​rubuc rag ah gebi ahaanba ama qayb ahaan waxay ku heshiiyeen inay ceeb tahay haddii nin aanu awoodin ama uusan garaacin xaaskiisa.
EAI-da Isbedelku wuxuu ku bilaabmayaa guriga (Beddel) Mashruucu wuxuu si firfircoon uga hadlayaa cawaaqibka IPV iyadoo la tijaabinayo faragelinta isdhexgalka bulshada, dabeecadda beddelka habdhaqanka ee loogu talagalay in lagu beddelo caadooyinka iyo dabeecadda iyadoo ujeedadu tahay in laga hortago IPV. Daraasaddan, qorayaashu waxay qiimeynayaan isku xirnaanta xeerarka bulshada iyo khibradaha haweenka. Waxaa jira wacyigelin sii kordheysa oo caalami ah oo ku saabsan baahida loo qabo tirakoob wanaagsan oo ku saabsan baahsanaanta, sababaha, iyo cawaaqibta IPV ee haweenka sida hordhaca u ah ciribtirka (Waaxda Qaramada Midoobay ee Qeybta Tirakoobka Dhaqaalaha iyo Bulshada, 2014).
Caadooyinka bulshada ayaa ah qawaaniin aan rasmi ahayn oo laga soo qaatay nidaamyo bulsheed kuwaas oo tilmaamaya dabeecadaha la rajeynayo, la oggol yahay, ama lagu xayiro duruufo gaar ah. Marka loo eego bilowga Change maxkamadaynta, oo ay weheliso xog kale, qawaaniin badan oo la ansixiyay oo ka jira Nepal ayaa ku lug leh xukunka ragga ee haweenka, waxayna taageertaa gardarrada waxayna xoojineysaa fikradda ah in raggu ay leeyihiin awoodda go'aan qaadashada koowaad guurka. Ragga waxaa bulsho ahaan laga filayaa inay masruufaan oo ilaashadaan qoysaskooda, waxay xaq u leeyihiin ixtiraam iyo adeecid, waxayna sameyn karaan xakameyn ama xoog inay gutaan kaalintooda (Ghimire iyo Samuels, 2017). Gabdhaha iyo haweenka reer Nepal ayaa badanaa lagu tilmaamaa doorka jinsiga ee muxaafidka ah, khibrad yar ayay leeyihiin waxayna xaddiday helitaanka waxbarashada iyo shaqada Dhaqammada sida guurka carruurta, nidaamka meherka, doorbididda wiilka iyo xaasaska badan ayaa sidoo kale gacan ka geysta baahsanaanta IPV. Adeegsiga xogta aasaasiga ah ee ka Change mashruuca, daraasadani waxay ku dhisan tahay cilmi baaris hore oo ka dhacday Nepal iyo caalamkaba iyadoo la baarayo iskuxirka cabir cusub oo caadooyinka bulshada ku saabsan khibradaha haweenka ee IPV.
Gaar ahaan, daraasadani waxay qiimeyneysaa bulshada dhexdeeda, bulshada dhexdeeda iyo saameynta macnaha guud ee Cadaadiska Rabshadaha Wadajirka ah (PVNS) ee halista haweenka ee IPV iyo in cabirkani uu ku daro macluumaad dheeri ah oo aan ka aheyn tan laga soo helay cabirka dabeecadaha isku dhafka ah, taas oo ah wakiil inta badan loo isticmaalo filashooyinka caadiga ah ee wadajirka ah.
Halkan uga soo degso maqaalka cilmi baarista